IMIBONO YEPATIO EDIBENEYO (IMIFANEKISO YOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Imibono yePatio edibeneyo (Imifanekiso yoyilo)
Igalari yezimvo zepatio ezifakwe ngaphakathi kubandakanya indleko, amanqaku athandwayo kunye nezitayile zoyilo.
Ukonwabisa konke kukwenza ukuba abantu bazive bekhululekile kwaye babenendawo ekhayeni lakho apho wonke umntu eya kuba nexesha elimnandi kunye neencoko ezixhokonxa iingcinga. Kodwa wenza ntoni xa ungenayo indawo eyoneleyo kwaye awufuni ukuzibophelela kwiprojekthi enkulu yokwakha? Zama ukuqaphela ukongezwa kwendawo ebiyelweyo yepatio - lukhetho olufanelekileyo oluya kukuvumela ukonwabisa nangaliphi na ixesha lonyaka kwaye uzive uqhagamshelene ngaphandle.
Kukho iindlela ezintle zokufaka ipatio yakho egutyungelweyo esiza kuxoxa ngayo kweli nqaku kwaye sisenza indawo efudumeleyo neyamkelekileyo yangaphakathi, efanelekileyo yokonwabisa iindwendwe, usapho kunye nabahlobo nokuba injani na imozulu, ngaphandle. Ipatio eyilwe kakuhle iya kubonelela ngolawulo malunga nokusingqongileyo okujikelezileyo kwaye kwangaxeshanye, inokongeza ixabiso kwikhaya lakho kwaye ikunike imbuyekezo engcono kutyalo-mali lwakho.
Iindleko zokuvalelwa kwePatio
Iglasi yokuGcina iPatio kwiNdleko
Uyifaka njani iPatio
Iimpawu zePatio evaliweyo
Uyilo lwePatio edibeneyo
Iglasi evaliweyo iPatio
I-Lattice ifakwe kwiiPatios
Iifayile zePatio ezifakwe ngaphakathi
Iikiti zePatio ezifakwe ngaphakathi
Izibonelelo zePatio evaliweyo
Kukho izinto ezithile ekufuneka uziqwalasele kwaye uziqonde ezinokuchaphazela iindleko zizonke zokufaka ipatio yakho. Oku kubandakanya iintlobo zezinto ezisetyenzisiweyo, ezinje ngeefestile kunye nokugquma. Uluhlu olumndilili lokwakha indawo evaliweyo yepatio ejikeleze i-US $ 8,000 ukuya kwi-US $ 15,000 kwaye inokuya phezulu njenge-US $ 35,000 ukuba ufaka umbane okanye ukongeza izinto zesiko kwigumbi. I-200 yeenyawo ezikwere kwi-patio iya kubiza malunga ne- $ 5.25 nge-sq ft nganye iyonke eyi- $ 1050. Ungathenga i-patio evaliweyo eyi-10 'x 16' phantsi kwe- $ 4000. ye
Iindleko ziya kuxhomekeka kwezi zinto zilandelayo:
Ubungakanani okanye imifanekiso yesikwere yepatio
Ezona ndleko ziphambili ekufuneka ziqwalaselwe ekufakweni kwepatio bubungakanani bendawo ekuya kuvalwa kuyo. Indawo encinci yepatio iya kufikeleleka kakhulu ukuyifaka ngaphandle kwesikwere esikhulu ngenxa yezinto ezifunekayo ukufakela indawo ebiyelweyo kunye nobude bexesha ekwakheni indawo ebiyelweyo.
Uhlobo lwendawo ebiyelweyo eza kusetyenziswa
Ukukhethwa kokuvalelwa okusetyenzisiweyo kungqina ukuba yenye into emisela iindleko zokufaka ipatio. Olona khetho luthandwayo nolqhelekileyo kukufaka indawo evaliweyo yophahla. Kodwa ukuba uhlahlo-lwabiwo mali, ukufaka isisitho somnyango kunye nezikrini ukugubungela amacala kuya kubiza kancinci kunophahla oluqhelekileyo olubiyelweyo olunezindonga zokwenyani.
Xa uvalela ipatio, ukufaka ifestile enefreyimu kabini ukuba uhlala kwimozulu ebandayo okanye indawo apho uhlangabezana nomoya onamandla ikunika ubushushu obungcono; kodwa ihlala ibiza kakhulu.
Uyilo kunye neDécor
Uyilo lwePatio ebiyelweyo kunye nokuphuculwa kokusebenza kuya kuba negalelo elikhulu kwiindleko zeprojekthi; kunye nayo yonke imihlobiso eyongezelelweyo enjengezibane zelanga, izibane ezijingayo kunye nonyango lwefestile ziya kongeza kwiindleko zakho zokubiyela ezipheleleyo.
Kuya kubakho izixeko eziza kufuna ukuba ufumane amaphepha mvume okuvalelwa kwepatio kunye nesebe lokwakha lendawo. Inkqubo yokugcina iimvume ngokuqinisekileyo iya kongeza kwiindleko zeprojekthi yakho. Kuya kufuneka unxibelelane nesikhombisi sedolophu yakho ngolwazi oluthe kratya malunga neemvume zokwakha kunye nokuchonga ukuba iyafuneka na indawo yakho. Iidolophu ezininzi ziya kuba nesiseko sedatha esikwi-intanethi apho unokufumana khona ulwazi oluthe kratya, kunye nokubonelela ngesakhono sokugcwalisa amaxwebhu kwi-Intanethi ukuze ufumane isicelo kunye nokwamkelwa.
Iglasi evaliweyo yeglasi efana negumbi lonyaka amathathu okanye Igumbi lokulala ilanga iindleko zinokuphakathi kwi-15,000 yeedola. Kulungiselelwe abo bafuna indawo yexesha elinexesha lokulala elangeni iindleko zinokuqhuba phakathi kwe- $ 25,000 ukuya kwi- $ 35,000.
Izixhobo zovalo lwepatio
Kukho izinto ezahlukeneyo ezinokunika ipatio yakho evaliweyo imbonakalo yayo eyahlukileyo kwaye ibonakalise ukhetho lwakho kunye nokhetho. Eminye imiba ekufuneka uyiqwalasele xa ukhetha izinto zepatio yakho evalelweyo yindawo yepatio yakho, ubungakanani bepati yakho evaliweyo yangaphandle, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nokufumaneka kwezinto kwindawo yakho. Ngokulungelelanisa i-patio yakho ebiyelweyo kwiimfuno zakho kunye nezinto ezifanelekileyo, ungazisa ipatio yakho ebomini kwaye uyenze indawo yakho yabucala kwaye ikhululeke.
Kumgangatho wakho wepatio odibeneyo kukho ukhetho oluninzi. Ngokuqhelekileyo ngepatio yangaphandle uya kufuna izinto ezihlala kakuhle phantsi kweemeko zemozulu ezimbi. Nangona kunjalo, nge-enclosed ungafumana indlela ethe kratya kwinto oyikhethayo.
Ikhonkrithi ihlala ixesha elide kwaye iphantsi kakhulu. Unokukhetha ukukhetha ukuba loluphi uhlobo lokugqiba oluza kusetyenziswa kumgangatho wakho wekhonkrithi, njengokugqitywa kwekhonkrithi egudileyo, isitampu, ibrashi, ukukora, ipateni, okanye ipeyinti eyenziweyo usebenzisa iingqalutye.
Isitena somelele, siyasebenziseka kwaye sinenkangeleko ecocekileyo nenomdla ehamba kakuhle nangayo nayiphi na indlela yokuvalela ipatio. Izitena zinokubekwa kuyilo lweepateni ezahlukeneyo, ezinje ngepateni yeherringbone, ibhondi esebenzayo okanye i-jack-on-jack.
Umgangatho ojijekileyo wamatye eflegi ubonelela ngokutsalwa okugqwesileyo ngakumbi xa kumanzi. Ilitye leflegi ziyafumaneka kuhlobo lwelitye, umbala, iimilo ezingaqhelekanga kwaye zihlala ziyintsimbi enye ukuya kwezintathu. Uninzi lwelitye lelifa eliqhelekileyo lilitye lentlabathi, ilitye lekalika, ibluestone kunye nequartzite.
Iipaneli zokungenelela ezidibeneyo ziyahlangana njengeziqwenga zepuzzle ezinokuthi zenziwe zibukeke njengezitena, ilitye lecobble okanye ilitye elisikiweyo.
Ezona tile zilungele ukusetyenziswa kwipatio yakho evalelweyo ziithayile zeceramic ezingafakwanga. I-Porcelain tile engaxutywanga ngumsebenzi onzima kunye nokuchaphazeleka kwebala. Ukujongwa kwe-rustic, iithayile zeterracotta zezona zibalaseleyo ikakhulu kwimozulu ethambileyo. Ukuba ukhetha ukutyibilika kwipatio kunye nokuhamba, kungcono ukuhamba neethayile zekwari. Sincoma ukusebenzisa ii-sealing kunye nokutyabeka kwiithayile zakho ukhuseleko olongezelelekileyo kumabala kunye nokufuma; kunye nokonyusa umbala wazo wendalo.
La ngamatye endalo asikwe asisikwere okanye iimilo zoxande ezisetyenziselwa unyango loyilo olusemthethweni ngakumbi njengegranite, imabhile, isileyiti, itravertine, ilitye lekalika, ilitye eliluhlaza, iphyllite kunye nelitye lentlabathi.
Iithayile zomthi kunye nomgangatho wokhuni
Iithayile zomthi zingabekwa ngokuthe ngqo ngaphezulu kwepatio yakho ukuze wenze indawo efudumeleyo. Iithayile zomthi akufuneki zenziwe ngomthi onzima wokwenene. Zininzi iithayile zomthi ezibukeka ngomthi kwintengiso ezinokuthi zikunike isitayile esifanayo sokuyila kunye nokuqina okuphezulu kunye neendleko.
Ezi zixhobo zihamba phambili kwimimandla eyomileyo njengenye yeengca; Izinto ezinjalo zibandakanya ilitye elityumkileyo, amatye ewonke, i-bark mulch, i-mulch mulch, i-granite ebolileyo kunye nesanti.
Ingca eyenziweyo / iithayile zengca ezingezizo - kulula ukuyigcina, ilungele abantwana kunye nezilwanyana ezifuywayo, ithambile kwaye ayitsali izinambuzane ngendlela efanayo nengca yendalo kwaye ishenxisa konke ukungabikho komzimba okubangelwa yingca yokwenene.
Ukuba unendawo enkulu, unokudibanisa izinto ezikhankanywe apha ngasentla ukwenza umdla obonakalayo ngakumbi okanye ukwaphula ipatio yakho kwindawo encinci yolonwabo okanye ukuyila indawo ekugxilwe kuyo yepatio ebiyelweyo.
Izinto zodonga - ukusebenzisa umnyango wesiphango kwakhona yenye yeendlela zokufaka iipatios ekudaleni udonga oluqinileyo lweefestile ngelixa ugcina indawo evulekileyo yendawo yangaphandle. Unokugcina ucango olunye kwiihenjisi zalo ukuze lusebenze njengokungena.
Izinto zesakhelo - Ukhetho oludumileyo lwesakhelo esinepatio yi-aluminium kunye nevinyl. I-Aluminium ikhethwa ngenxa yamandla ayo kunye nokuqina kwayo, kodwa ihlala ishushu ibangela ukuba ipatiyo yonke ishushu. IVinyl kwelinye icala, ifuna ukugcinwa kancinci kwaye ayithambekele ekukrwemeni nasezintanjeni.
Inkqubo eyakhiwe ngaphambili yodonga lwefestile - le nkqubo yodonga lwefestile yenziwe ngokwezifiso kwaye yenziwa ukuze ilingane nokuvuleka kwepatiyo ofuna ukuyifaka. Kukho uyilo lweepaneli ezininzi zefestile onokukhetha kuzo njengepaneli yokuhambisa okanye ujingi ukuvula ipaneli; Uhlobo ngalunye luvumela ukuhamba komoya okuphezulu kwindawo evaliweyo.
Amakhethini angaphandle kunye namakhethini - Iveranda yangaphandle yamakhethini kunye ne-drapes yongeza ubuhle kwaye yenza imeko ye-whimsical kunye neyokwamkela. Uhlobo oluchaziweyo lwekhuselo leveranda ngamakhethini okubamba iingcongconi agcina iingcongconi kunye nezinye izinambuzane kude; kunye, oku kubiza imali encinci ukufaka kunendawo ebiyelweyo yescreen.
Ngaba ufuna indawo eyongezelelweyo yokutya, ukonwabisa okanye indawo nje yokuphumla emva komsebenzi wosuku? Ngaba ucinga ukwandisa ikhaya lakho kwiyadi yakho yangasemva? Nazi ezinye ezithandwayo iintlobo zeepatios Ngoyilo oluvalelweyo oluya kwenza indawo yakho yokuhlala engaphandle ibenakho ukonwaba, incede ekusebenziseni le ndawo, kwaye kwangaxeshanye ikhangeleke inomtsalane.
Iglasi evaliweyo evaliweyo yenye yeentlobo ezithandwayo zoyilo ngakumbi iipatios kuba zikuvumela ukuba uzive ungaphandle naliphi na ixesha lonyaka. Unokukhetha phakathi kweglasi enye okanye iphaneli ezimbini ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ifestile efakwe kwiglasi efakwe kwiifestile ezimbini ezifakwe ngaphakathi kunye neepaneli zokufaka umnyango ezifakwe kwipatio yakho ziya kudala indawo enganyangekiyo yemozulu onokuyonwabela unyaka wonke.
Sebenzisa i-latticework screen ebiyelweyo kukuvumela ukuba ubone ngaphandle kodwa kwangaxeshanye kukunika ubumfihlo obufunayo. Isikrini seLatice esenziwe ngomsedare okanye i-vinyl zezona zinto ziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
Kukho iindidi zefestile ebiyelweyo onokukhetha kuyo kwipatio yakho, enye yazo yindawo yeakriliki eza nesakhelo esiqinileyo sealuminium- ilungele ukubonwa, ukukhanyisa kwaye kwangaxeshanye ivumela umoya opholileyo ukuba ungene. Enye iglasi ipaneli eyindlela elungileyo yokuvumela ukukhanya kwendalo kwipatiyo yakho evaliweyo. Ukuba ufuna enye indlela yokwenza iglasi, khetha i-pane ye-vinyl, zinobunzima bokukhanya, bomelele kwaye zezona zilungileyo kuzo zonke zibiza iqhezu lexabiso lentengo yeglasi.
Guqula ipatio yakho ibe yindawo yokuhlaziya eyonwabisayo kunye nokuphumla. Ukuvala i-patio yemixholo yakho yetropiki ukuze ufumane indawo yabucala engakumbi ukuze uphumle, zama ukusebenzisa umthunzi wefestile omde owenziwe ngoqalo okanye ngomthi. Olu hlobo lwee-shades okanye iimfama ziya kugcina ilanga lingaphandle kwaye linokuqengqeleka xa imozulu imbi.
Sebenzisa iziqwenga zefanitshala ezikhaphukhaphu ezinje ngesikhanyisi esikhanyayo okanye iziqwenga zocingo, ulinganise amanzi abalekayo ngomthombo okanye isimulator yempophoma kwaye uyisebenzise njengendawo ephambili okanye udonga. Yongeza iitotshi zetotshi zokukhanya kunye nokukhanya ebusuku, zibandakanya izityalo ezitshatyalaliswayo ezinje ngoqalo, imithi yesundu echumileyo, iiorchid, kunye namatye ukwenza ubume obahlukeneyo bokujikeleza ipatio yakho.
Ipatiyo endala efakwe kwishedyuli ivumela ukuhamba komoya okwaneleyo kwaye ikunika ukuba uzive ungaphandle ngaphandle kokuvumela izinambuzane, izinambuzane, kunye nemvula ukuba ingene. Ukuvavanywa kwipatio kunokwenziwa ngokufaka isakhelo esikhethekileyo sobunjineli kunye neepaneli zesikrini ezijikelezayo. Inokuthintela ilitha elangeni kwaye kulula ukuyigcina kwaye ifikeleleke kakhulu.
Ukufakela indawo ebiyelweyo kwindawo yokugcina iipati yakho ikakhulu kungenxa yezizathu zabucala. Ngokwesiqhelo, iikhowudi zokwakha zinyanzelisa ukuba indawo ebiyelweyo ayinakudlula kubude obuziimitha ezintandathu ukuphakama, kodwa jonga iikhowudi zakho zokwakha zengingqi njengoko kunokubakho umahluko kwiimfuno kwindawo yakho. Indawo ebiyelweyo ihlala yakhiwe ngomthi ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso zakho kunye noyilo. Inkuni efunyenweyo inokusetyenziselwa ukubonakala okungafaniyo kunye ne-rustic. Kukho indawo ebiyelweyo yothango efumaneka kwimarike. Bona Okuninzi izimvo zocingo lwabucala Apha.
Amagumbi elanga aneefreyimu eziqinileyo ezineefestile ezininzi kwaye zihlala zakhiwa njengegumbi elongezelelekileyo lendlu endaweni yesakhiwo esahlukileyo. Uphahla lwamagumbi elanga lunokwenziwa ngeglasi kwaye luya kukunika umbono ongaphantsi komgangatho wangaphandle. Bona Okuninzi Uyilo lwelanga Apha.
Ingqonge ipatio yakho ngamagqabi aluhlaza ukuze usebenze njengocingo lokuhlala ngasese kwaye unokuguqula ipatio yakho ibe yindawo yokubuyela ngasese. Phakathi kweentambo ezithandwayo nezithandwayo yiarborvitae, bamboo, skip laurel, privet, holly, boxwood, hicks yew, red red twig dogwood, chocolate vine, kunye neuonymus. Unokufaka iibhokisi zokutyala kwaye uzityale ngeentyatyambo ezinjenge roses, daisy, bee balm, zinnias, kunye nemifuno enje ngetumato, itswele, ipepile kunye namayeza. Ukusetyenziswa kobuchule bokuhamba kunye nezityalo ezinyukayo ezinje ngeediliya zivumela ukuba ubukele, ubushushu, ubutyebi, kunye nokucoceka kwipatio yakho yegadi.
Uthando kunye nokuzonwabisa ngokugcoba ngelixa usonwabisa amalungu osapho kunye nabahlobo yenye yezinto ezilula zobomi yiyo loo nto abanini khaya befuna iipatio ezisemva kwezindlu ezihlala ukutya ngaphandle. Indawo yokutyela engaphandle inokukunceda usebenzise ngcono ipatio yakho yangasemva kwaye uphucule ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho.
Jonga olu donga lubekwe kwikhithi yelanga IAmazon
Kukho izinto ezingabizi mali ingaphambi kokuveliswa kwegumbi lokulala elingasemva kwigazethi ene-netebebos ezikhoyo ezinokuthi zibambe ngokulula indawo ye-10 nge-10 yeenyawo okanye i-10 nge-12 iinyawo, okanye i-gazebos eyenziwe kwangaphambili ye-canvas ikhethwe kakuhle, ilungele loo ndawo yongezelelweyo uyifunayo yolonwabo kunye nokuphumla kuhlahlo-lwabiwo mali.
Imfihlo kunye nokhuseleko olongezelelweyo - Ukungena kwipatio yakho kuya kukunika ubumfihlo obongezelelweyo kunye nokuphucula ukhuseleko lwekhaya lakho. Unokonwabela ubuhle bangaphandle kunye noxolo lwendawo okujikeleze ngaphandle kokuphazamisa ubumfihlo. Unokuphumla kwaye ukhululeke ngelixa ugcina iingcongconi kunye nezinambuzane ezingafunekiyo ezinokonakalisa ubusuku obuhle ngaphandle kwaye zinokunceda ukukhusela impilo yakho kunye nokuba sempilweni.
Ukunyuka kwexabiso lepropathi - Ipatio evaliweyo lukhetho olukhulu lokufumana ixabiso ngakumbi lemali yakho kunye nembuyekezo engcono kutyalo-mali lwakho lwasekhaya. Ukongeza ipatio evaliweyo kusebenza ngakumbi ngexesha kunye neendleko kwaye kuya kubonelela ngesibheno sobuhle kwikhaya lakho, ukongeza indawo engakumbi yolonwabo enokunceda ukuthengisa ipropathi yakho ngokukhawuleza kwintengiso.
Indawo yokugcina eyongezelelweyo - Ipatio evaliweyo inakho ukusebenza kakhulu njengoko inokusetyenziselwa ukugcina ifanitshala enkulu, izixhobo zokusebenza eyadini, izinto zasegadini kunye nendawo yokugcina iinkuni.
Ke kwiprojekthi elandelayo yangaphandle yokongeza ekhayeni lakho, ukwakha ipatio evaliweyo inokuba yile nto uyifunayo kuloo ndawo eyongezelelweyo ukonwabisa, okanye indawo eyongezelelweyo oyifunayo yokugcina; kwaye mhlawumbi enye yeengcamango zethu zoyilo inokuba yeyona inomdla kuyo. Uyilo olunxulumene ngakumbi jonga igalari yethu ye Izimvo zebala elingasemva .
Umdlali oDlalayo oDlala ngeRubber Mulch 77 Cu. I-Ft. - 2… $ 799.00 umthengisi ogqibelele (32) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimfuno zeMbewu, Ukuqokelelwa kweMbewu yeBhotolo (3… $ 10.50 umthengisi ogqibelele (61) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ukuthengiswa okungamanzi kweBanga le-0.5mm IVinyl ... $ 239.00 umthengisi ogqibelele (9) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Igadi ecocekileyo 50-177-2CAR Magnetic Doo… $ 79.33 umthengisi ogqibelele (714) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
imidlalo yokudlala kwiqela le-bachelorette
izihlangu oza kuzinxiba emtshatweni
Iinwele ezimfutshane ezisemthethweni zemitshato
rb iingoma ngokuthanda umntu
Umtshato wesine izimvo zesipho kuye